Safety Officer Archives - Glory Assumption Space
Safety Officer – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / မန္တလေးတိုင်း ပုလိပ်မြို့နယ် ။
Location in : မန္တလေးတိုင်း ပုလိပ်မြို့နယ်
1.	Safety Officer – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / မန္တလေးတိုင်း ပုလိပ်မြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	Safety နှင့်ပတ်သက်သော Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၂၃ - ၃၀)နှစ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ •	Safety လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	Computer Microsoft Office အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Reporting Skill ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုလိပ်စက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုလိပ်စက်ရုံကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Safety Officer – Male (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ်
1. Safety Officer – Male (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။ • English Communication ကောင်းရမည်။ • အသက် (၂၁ - ၃၅)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ • သမိုင်းလမ်းဆုံထိ ဖယ်ရီရှိသည်။ယူနီဖောင်းရှိသည်။ • နေ့လည်စာထမင်းကျွေးသည်။ • အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:30 PM) • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Interior Decoration Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail - gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No - 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေ်ာင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Safety Officer – Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။
Safety Officer – Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
Minimum (5) years’ experience in relate field.
Understand in English ( Both written and spoken).
Must be computer literate and familiar with email, Microsoft Word , Excel and able to prepare Power Point Presentations.
Have good Communication ability with any nationality, ethics, religious.
If necessary, can be able to travel
အလုပ်ချိန် ( 9:00 – 5:00 )
စနေနေ့တစ်ဝက် ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223785 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Safety Assistant, Male
Any graduated, Safety နှင့်ပက်သတ်သော လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားရမည်။ Safety နှင့်ပက်သတ် သော အတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ Safety နှင့်ပက်သတ်သောပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူပေးရမည် ထိန်းသိမ်းပေးရမည်။
[caption id="attachment_364" align="alignnone" width="850"] A fun concept graphic for happy workers.[/caption]
Safety Officer Male(5Posts)
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရှိ Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Safety Officer (M 5Posts) 1.ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ 2.လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁နှစ်)ရှိသူဖြစ်ရမည်။ 3.Ferry စီစဉ်ပေးသည်။ E-mail- gasrecruit.hr6@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ - တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။